Nwayọọ Steel ịgbado ọkụ Electrode
Igwe anaghị agba nchara ịgbado ọkụ Electrode
Ịgbado ọkụ Powder
Igba Iron ịgbado ọkụ Electrode
Mkpanaka ịgbado ọkụ Rod
Stick ịgbado ọkụ Usoro Intro
Post oge: Apr-01-2021
Stick ịgbado ọkụ Usoro Intro SMAW (Shielded Metal Arc ịgbado ọkụ) na-akpọkarị osisi ịgbado ọkụ. Ọ bụ otu n'ime usoro ịgbado ọkụ kachasị ewu ewu taa. Ihe ewu ewu ya bụ n'ihi ntụgharị nke usoro na ịdị mfe na ọnụ ala nke akụrụngwa na arụ ọrụ. SMAW bụkarị anyị ...GỤKWUO »
Kedu ihe bụ Electrodes Stick?
Gbado ọkụ electrodes bụ waya wires na n'ụdị na chemical coatings. A na-eji mkpanaka ahụ akwado arc ịgbado ọkụ ma nyekwa igwe njupụta achọrọ maka njikọta ahụ. Ihe mkpuchi ahụ na-echebe metal ahụ ka ọ ghara imebi emebi, na-eme ka arc ahụ dị ike, ma na-emezi weld. Dayameta nke waya, obere ...GỤKWUO »
General Ihe About ịgbado ọkụ Electrodes
General ihe About ịgbado ọkụ Electrodes Tianqiao ịgbado ọkụ electrode bụ ọkachamara nhọrọ ịgbado ọkụ electrodes dị oké mkpa, na ọ dị mkpa na a welder na mkpa mkpara mara ụdị iji maka dị iche iche ọrụ. Kedu ihe dị mma ...GỤKWUO »
Tel & WhatsApp: + 86-18403311434 (Anwụ na-acha)
Faksị: 0086 311 82623236
Adreesị: Nanzuo Town, Yuanshi County, Shijiazhuang, Hebei, China